I-Apple sele izakuvavanya iiglasi ezahlukeneyo zenyani | IPhone iindaba
I-Apple ibisele ivavanya iiglasi ezahlukeneyo zenyani
Alithandabuzeki elokuba ukubheja okukhulu kuka-Apple ngonyaka ka-2018 yinto engathandabuzekiyo, kwaye i-ARKit linyathelo lokuqala kuphela leprojekthi enkulu eya kuthi iphele ngesixhobo esizinikezele ngokukodwa kule teknoloji intsha, ekhoyo ngoku kumajelo eendaba, akukho mntu ndifumene ukuyivavanya okwangoku. DKudala kuthethwa ngeeglasi zenyani ezingekhoyo, ngeGlass kaGoogle engasasebenziyo sisixhobo sokuqala sohlobo lwayo ukuzazisa, kunye neApple iyasebenza, ngokweengxelo ezininzi, kwiimodeli ezahlukeneyo.
Iiglasi ezizimeleyo ezingafuneki i-iPhone ukuba isetyenziswe, kunye nezinye iimodeli eziya kuxhomekeka kwi-smartphone eza kusetyenziswaOku kubonakala ngathi kukhetho olwahlukileyo esele ivavanywa yinkampani, kwaye ayinakuba yeyodwa, kodwa ibe iyancedisana. Amanyathelo athathwe nge-ARKit kunye ne-iPhone 8 elandelayo iya kuba sisitshixo sokuphelisa le gadget intsha enokufika ukuphela kuka-2018.
Ngokungafaniyo neNyaniso eyiyo, ukunganyanzeliswa kweNyaniso akukuhlukanisi nendawo ekungqongileyo, kodwa endaweni yoko yongeza uluhlu lolwazi. Ngale nto, into eqhelekileyo iya kuba kukusebenzisa iiglasi ezinengqiqo eziphantse zingabonakali, kwisitayile seGoogle Glass. Kodwa kude kube kufikelelwe kwimodeli yokugqibela kubonakala ngathi ukusebenzisa i-iPhone njengeqonga lokuvavanya le nto intsha kunokuba yeyona nto isengqiqweni ukuyenza.. Ngokwamahemuhemu, i-iPhone 8 elandelayo inokubandakanya iindaba eziyimfuneko ukufezekisa le njongo.
I-iPhone yangoku eneRetina yayo ebonisa lags ngasemva kokhuphiswano xa ujonga isisombululo sesikrini kunye noxinano lwepikseli. Nangona kunjalo, iscreen esitsha se-iPhone 8, ukuba sihoya le nto idumileyo i-HomePod etyhila ukuba besithetha ngayo ixesha elide, iya kuba nesisombululo esiphakamileyo kunye ne-pixel density. Ngescreen esingu-5,15-intshi kunye nokusonjululwa kwe-2.436 x 1.125 kuya kuba ngaphezulu kokulingene ukuyibeka kufutshane namehlo ethu. Ukongeza, iApple yazisa ngezikrini ezitsha ze-iPad ngenqanaba lokuhlaziya le-120Hz elinokunceda ekuphuculeni amava kwezi glasi zintsha.
Imodeli efunwa yi-iPhone inokuba yimodeli yovavanyo kuphela yokuvavanya imisebenzi kwaye ingaze ithengiswe, okanye I-Apple inokugqibela ngokusungula zombini iiglasi, ezinye zitshiphu kune-iPhone enokufuna ukusebenza kwaye ezinye zihambele phambili kwaye zinexabiso eliphezulu kwabo bafuna ukonwabela okona kumava okwenyani okungathandabuzekiyo. Okucacileyo kukuba asizukuthatha thuba lide ukuqala ukwazi iinkcukacha zolu fakelo lutsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-Apple ibisele ivavanya iiglasi ezahlukeneyo zenyani
I-Apple iqala ukuthengisa ikiti yeRED RAVEN yekhamera ekhethekileyo kwiVenkile yeApple
Ungazongeza njani iifoto kunye neevidiyo ezisuka kwi-reel ukuya kwibali lethu le-Instagram